Isdhexgalka ee content iyo sifooyinka shinni ah ee beerta Karnik
Ugu Weyn Ee Budley David
Noocyada ugu waaweyn ee basal lagu beero beerta
Budley ama buddleya (laga bilaabo Laatiin Buddleja) waa geed ubax jilicsan ama geedo qashin ah (waxaa sidoo kale jira geedo geedeed) oo laga helo qoyska Norichnikova. Ma taqaanaa? Budley waxaa loogu magac daray Botanistaha Ingriiska A. Baddle. Waxaa sidoo kale loo yaqaannaa lilac dayrta (inflorescences ee budheel ah oo u eg isku duubnaanta lilacs), a magnet for dhicin iyo dhirta abaarta (pollinated by dhicin soo jiidashada by ubaxa ubax).
Yaanyo "Cherry Falls": kala duwanaanta ampelnye ee yaanyada cherry ka soo jeeda Faransiiska
Tiknoolajiyada abuurista dusha sare ee biriijka ah: samaynta, jarista
Beeralayda Masaarida 'walwalka macaan
Qurux qurux badan oo dhadhan fiican leh - yaanyo "Raspberry Jingle": sharaxaada kala duwan iyo sawir
Waa maxay kookaha wax ku oolka ah, iyo sida loo isticmaalo ujeedooyinka qoyska iyo qurxinta
Qof walba waa ogyahay dabacasaha Korean - saxan ayaa muddo dheer oo qumman la helay dadweynaha. Zucchini Kuuriyaanka waa mid aad u yar, inkastoo Saladkan la ilaaliyay uu leeyahay dhadhan aan fiicnayn. Hoos waxaa ku qoran wax la yiraahdo diyaarintiisa. Takhasuska dhadhanka Dhadhanka saladkan, zucchini iyo karootada ayaa ah mid caqli gal ah, koronto-yaqaanku wuxuu xoojinayaa kala duwanaanta dhadhanka, iyo basbaaska iyo basbaaska kulul waxay ku siinayaan fiiq iyo jajab. Read More
Waxaanu ku baranaynaa Vanilla orchid orchid. Daryeelka ubaxa iyo tilmaamaha sawir leh
Jarmalku waa soodhawrka xayeysiinta ah ee alaabooyinka Ukriga
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Budley David 2019